लामोसमयसम्म पत्ता लाग्न नसकेको निर्मला पन्त प्रकरणमा आयो पहिलोपटक यस्तो रिपोर्ट, अब के गर्ला प्रहरी ? – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता October 24, 2019 December 10, 2019 Leaveacomment on लामोसमयसम्म पत्ता लाग्न नसकेको निर्मला पन्त प्रकरणमा आयो पहिलोपटक यस्तो रिपोर्ट, अब के गर्ला प्रहरी ?
महेन्द्रनगर। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको करणीपछि ह त्या घटनाको डिएनए परीक्षणमा त्रुटि भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका डिएनए विशेषज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वको छानबिन समितिले डिएनएको नमुना परीक्षणमै त्रुटि भएकाले सो घटनामा डिएनएबाट दोषी पत्ता नलाग्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले मंगलबार गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
१० साउन ०७५ मा महेन्द्रनगरमा पन्तको करणीपछि ह त्या भएको थियो । घटनाको २५ दिनपछि प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मानसिक रोगी रहेका नक्कली अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । पछि विष्टको डिएनएसमेत नमिलेपछि प्रहरीमाथि सर्वसाधारणको आक्रोश बढेको थियो । प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको, यातना दिएको भन्दै आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले यो खबर लेखेका छन् ।